”Waxaa manhajkooda ku qoran in Carabta la laayo!” – Haweenay ka tirsan madaxda Imaaraadka oo weerarkii ugu xumaa ku qaadday xiriirka dalkeeda & Israel | Hadalsame Media
Home Wararka ”Waxaa manhajkooda ku qoran in Carabta la laayo!” – Haweenay ka...
”Waxaa manhajkooda ku qoran in Carabta la laayo!” – Haweenay ka tirsan madaxda Imaaraadka oo weerarkii ugu xumaa ku qaadday xiriirka dalkeeda & Israel
(Shaariqa) 30 Jan 2021 – Xaaska Amiirka Shaariqah ayaa weerar cad ku qaadday xiriirka uu dalkeedu la yeeshay Israel, gaar ahaan dhanka waxbarashada.
Sheikha Jawaher Bint Mohammed Al-Qasimi ayaa warkan ugu dan lahayd kulan dhanka khadka ay ku yeesheen Wasaaradaha Waxbarashada Imaaraadka iyo Israel, kaasoo looga hadlay in ay arday is dhaafsadaan iskana kaashadaan tacliinta sare.
“Manhajkoodu wuxuu dhiirri geliyaa dilka Carabta iyo dhaca dhulkooda,” ayay kusoo qortay Twitter.
“Waa ayo Wasiirkooda Waxbarashada Yoav Galant? Waa mid ka mid ah jeneraallada ugu dhiigyacabsan taariikhda Israel, waa ninkii 1979-kii Bayruut ku diley Xasan Salameh xerada Jeniin ayuu sidoo kale ku xasuuqay kumannaan Falastiini ah, wuxuu 1996-kii Qana oo Lubnaan ah ku laayey kumanaan kale.” ayay raacisay.
Qoraalka Sheikha Jawaher ayaa noqonaya mucaaradaddii ugu cadcadayd ee kasoo baxda guryaha looga taliyo Imaaraadka ee ka dhan ah xiriirka aan loo ducayn ee Imaaraadka iyo Israel, iyadoo ay dad badani tweet-ka ka falceliyeen iyagoo amaanay geesinnimadeeda.
2013, waxay QM Sheikha Jawaher u magacowday ololeeye cad cad oo ka tirsan Hay’adda Qaxootiga QM ee UNHCR qaybteeda Imaaraadka.
Previous article”Waxay nooga adkaanayaan Bariga Badda Dhexe” – Giriigga oo ka walaacsan gujisyo uu iibsadey Turkiga & jac uu kala kulmay Jarmanka
Next articleGOOGOOSKA & SAWIRRADA: Bologna vs AC Milan 1-2 (Milan oo hoggaanka si KMG u dheereeysatay)